Al-Shabaab oo wacad ku martay in ay khaarajin doonto xildhibaanada cusub ee baarlamaanka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandAl-Shabaab oo wacad ku martay in ay khaarajin doonto xildhibaanada cusub ee baarlamaanka
December 14, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha Puntland oo shahaadada ansixinta siiyay xildhibaanada Puntland u matali doona labada aqal ee kan hoose iyo kan sare ee dowladda federaalka. [Xuquuqda Sawirka: Puntland Post]
Garoowe-(Puntland Mirror) Kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa wacad ku martay in ay dilli doonto xubnaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ee dhawaan la doortay, sida uu sheegay xildhibaan.
Xildhibaan kasoo jeeda Puntland, oo codsaday in aan magaciisa la sheegin ayaa warsidaha Puntland Mirror khadka taleefoonka ugu sheegay in uu fariin qoraal ah ka helay Al-Shabaab, taasoo ay ugu hanjabayaan in ay dilli doonaan.
“Waxaan helay fariin qoraal ah oo ka timid Al-Shabaab, waxayna igu dhaheen waanu ku dillaynaa haddii aadan ka bixin xubinimada baarlamaanka.” Ayuu yiri xildhibaanku.
Tan iyo 2012-kii, 18 xildhibaan ayaa lagu dilay Muqdisho, intooda badan waxaa masuuliyada dilkooda sheegatay kooxda hubaysan ee Al-Shabaab. Iyadoo sidoo kale in ka badan toban xildhibaan ay ka badbaadeen isku day khaarajin.
Xildhibaanada cusub ee la doortay ayaa maalmaha soo socda ku kulmi doona Muqdisho, si ay ugu codeeyaan madaxweynaha cusub ee dalka.
December 22, 2016 Ilhaan Cumar oo soo dhaweyn diiran ka heshay Puntland
Somali PM Sharmake travels to UAE
A U.S. commando was killed and four others were wounded on Friday when they came under fire in Somalia during an operation against al-Shabaab militants, the U.S. military said. The U.S. special operations forces were [...]
Ugu yaraan 17 qof oo ku geeriyootay dagaal u dhaxeeya Al-Shabaab iyo maleeshiyo beeleed oo ka dhacay deegaanka Xaradheere
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 17 qof ayaa ku geeriyootay dagaal u dhaxeeya maleeshiyaad katirsan Al-Shabaab iyo maleeshiyo beeleed oo ka dhacay deegaanada maamulka Galmudug. Idaacada dowladda ee Radio Muqdisho ayaa maanta oo Khamiis ah ku [...]
Duqii hore ee Muqdisho Muungaab oo loo magacaabay wasiir dowlaha cadaalada DFS
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dowlada federaalka Soomaaliya, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa u magaacabay Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) wasiir dowlaha cusub ee wasaarada cadaalada Soomaaliya. Sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya, [...]